माला शाहलाई हिरासतबाट सिधै जर्नेलको घरमा लाने ! अब के होला जर्नेल खत्रीको अवस्था ? (हेर्नुस् भिडियो) – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /Video/माला शाहलाई हिरासतबाट सिधै जर्नेलको घरमा लाने ! अब के होला जर्नेल खत्रीको अवस्था ? (हेर्नुस् भिडियो)
माला शाहलाई हिरासतबाट सिधै जर्नेलको घरमा लाने ! अब के होला जर्नेल खत्रीको अवस्था ? (हेर्नुस् भिडियो)
बिहीबार दिउँसो महानगरीय प्रहरी प्रभाग भैंसेपाटीका प्रमुख इन्सपेक्टर देवीप्रसाद पौडेलले नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त सहायक रथी (जर्नेल) को बचाउमा लागेर बच्चा बोकेकी हिमा श्रेष्ठमाथि ला’ठी बर्साएका थिए । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको उक्त भिडियो पश्चात इन्सपेक्टर पौडेल निकै आलोचित भएका थिए ।
बच्चा बोकेकी महिला हिमा श्रेष्ठमाथि जथाभावी ला’ठी हा’न्ने प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) को जिम्मेवारी खोसिएको छ । महानगरीय प्रहरी प्रभाग भैंसेपाटीको नेतृत्वमा कार्यरत इन्सपेक्टर देवीप्रसाद पौडेल लाई नेतृत्वबाट हटाएर सट्टामा नयाँ इन्स्पेक्टर पठाइएको जनाइएको छ । यसै बिषयलाई लिएर सामाजिक अभियन्ता सावित्री सुबेदीले माला शाह र हिमा श्रेष्ठको पक्षमा बोल्दै उनीहरुको न्यायको लड्ने बताएकी छिन् ।
सुबेदीले पिडित महिलामाथि मुद्दा चलाउन र दु’र्व्यवहार गर्ने अधिकार प्रहरीलाई कसले दियो भन्दै प्रश्न गरेकी छिन् । हिमामाथि लाठी बर्साउने इन्सपेक्टर देवीप्रसाद पौडेललाई जागिरबाट बर्खास्त गरेर जेल चलान गर्नुपर्ने बताएकी छिन् । हिमा श्रेष्ठमाथि भएको अपमान सम्पूर्ण नारीको अपमान भएको उनको भनाइ छ । पिडित माला शाहले न्याय पाउनुपर्ने माग राख्दै उनले उनको न्यायको लागि आन्दोलन गर्न पनि पछि नहट्ने बताएकी छिन् । हेर्नुस् तलको भिडियो :
अब हामीले केही नयाँ काम सुरु गछौँ, तब कयौँ समस्या आउने गर्दछन्। कुनै व्यक्तिले ती समस्याबाट हैरानी भएर कामलाई अधुरै छोडिदिन्छन् भने कुनै व्यक्ति ती समस्यासँग जुधेर लगातार काममा लागिरहन्छन्। तर कुनै बेला यस्तो समय आउछ समस्या घटनुको साटो अझ बढ्दै जान्छ।
पशुपतिनाथको मन्दिर नजिक पूर्व युवराज पारश सडकमा झाडु लगाउँदै सफाई गर्दै गरेको अवस्थामा भेटीए (भिडियो)
ज्ञानेन्द्र शाही बोकेर आए भारत वि’रुद्द सिमानाको प्रमाण, अब छो’ड्दिन भन्दै एयरपोर्टबाटै ग’र्जिए (भिडियो हेर्नुस्)
विदेशबाट फर्किदा आफ्नै साथीसंग श्रीमती १० लाख र सबै सम्पति लिएर भागेपछि…( भिडियो)
श्रीमतीलाई त्रिशुली नदीमा ख’सालेर श्रीमानले गरे ड’रलाग्दो ह’त्या ! मृ’तक सञ्जुकी दिदीले खोलिन रहस्य (हेर्नुस् भिडियो)
नेपाली बा आमाकी नेपाली छोरी, नेपालीसंगै हार्नुपर्दा बुवालाई अंगालो हालेर यसरी धरधरी रोइन् (भिडियो हेर्नुस्)